‘लिङग’ ढोग्नेहरु ‘नारी देह’लाई किन देखि सहदैनन ? - ज्योति मगर | EuropeNepal.Net
‘लिङग’ ढोग्नेहरु ‘नारी देह’लाई किन देखि सहदैनन ? - ज्योति मगर
केहि साताअघि स्तन देखिएको भन्दै नेपाल टेलिभिजनले अन्तरवार्ता प्रसारणमा रोक लगाएपछि गायिका एवं मोडल ज्योति मगर एकाएक चर्चामा आइन । उनको...
केहि साताअघि स्तन देखिएको भन्दै नेपाल टेलिभिजनले अन्तरवार्ता प्रसारणमा रोक लगाएपछि गायिका एवं मोडल ज्योति मगर एकाएक चर्चामा आइन ।
उनको पहिरनले अन्तरवार्ता दिने क्रममा राम्रोसँग स्तन छोपेन र उनको अन्तरवार्ता भल्गर भएको भन्दै प्रसारणमा रोक लगाइयो । उक्त घटनासँगै धेरैले ज्योति मगरमाथी विभिन्न प्रश्नहरु उठाए । उनका कयौ फ्यानहरुले उनलाई गाली गरे भने कसैले उनको समर्थन गर्दै अभिब्यक्ति दिए ।
तर यो घटनाले ज्योतिलाई भने खासै फरक पारेन । उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा खुलेरै हिडिन र खुलेरै बोलिन । उनले नेपाल टेलिभिजनले पक्षपात गरेको भन्दै आफ्नो भनाईमा आक्रोश समेत पोखिन । उनी अहिले पनि छोटा लुगा लगाउन कति पनि हिच्किचाउदैनन ।
हालै मात्र समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ज्योतिले आफुलाई आलोचना गर्नेहरु माथी प्रश्न उठाएका छन । उनले गायन आफ्नो पेशा र मोडलिङ प्याशन बताउदै कलाकारिता बुझ्नेको लागी खुल्ला आकाश र नबुझ्नेको लागी कुवा भएको बताएकी छिन ।
नाङगो बाबा हरुको पुजा गर्ने र लिङग ढोगेर आशिर्वाद लिने चलन भएको भन्दै उनी लेख्छिन : नारी देहलाई यति धेरै किन देखि सहदैनन ?
उनले अरु पनि थुप्रै प्रसंगलाई स्टाटसमा जोडेका छन । उनको स्टाटस हेर्नुहोस जस्ताको तस्तै तस्वीरमा
EuropeNepal.Net: ‘लिङग’ ढोग्नेहरु ‘नारी देह’लाई किन देखि सहदैनन ? - ज्योति मगर